मोरङमा बोक्सी आरोपमा महिलामाथि निर्घात कुटपिट ! « MNTVONLINE.COM
मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–३ आइतबारेमा बोक्सीको आरोप लगाउँदै एक महिलामाथि निर्घात कुटपिट गरिएको छ । केही दिनदेखि धामीझाँक्रीको काम गर्दै आएकी स्थानीय २९ वर्षीया धनहीरा राईले छिमेकी ३८ वर्षीया महिलामाथि कुटपिट गरेको प्रहरीले जनाएको छ । कुटपिट गरिएको भिडियोसहित पीडित पक्ष बिहीबार बिहान प्रहरी कार्यालय पुगेपछि घटना बाहिर आएको हो।
पीडित पक्षले किटानी जाहेरी दिएसँगै कुटपिटमा संलग्न धनहीरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनले चिन्ता बस्दा प्रयोग गरेको त्रिसूलले प्रहार गर्दा र घोच्दा महिलाको शरीरभरी चोट रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका प्रहरी निरीक्षक ऋषिराज ढकालले जानकारी दिए । आफ्नो शरीरमा धामी उत्रिएको भन्दै धनहीरा थाल ठटाएर मंगलबारसाँझबाट आफ्नै घरको बरण्डामा चिन्ता बसेकी थिइन् । त्यही चिन्ता हेर्न आएकी छिमेकी महिलालाई धनहीराले बुधबार बिहान ४ः३० बजेतिर बोक्सीको आरोप लगाउँदै कुटपिट गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार धामी बस्दा प्रयोग गरेको त्रिसूलले प्रहार गरिएकी महिलाको पेट, हात, काँध, पाखुरा लगायत शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ । चोट लागेको ठाउँबाट धेरै रगत पनि बगेको प्रहरीले जनाएको छ । कुटपिटबाट घाइते भएर उठ्न नसक्ने बनेकी पीडित बुधबार दिनभर ओछ्यानमै थला परेकी थिइन् ।
चिन्ता बसेको ठाउँमा आएर जथाभावी गरेको र बोक्सीको तन्त्रमन्त्र गर्दैै धामीविद्यामा असर पुर्‍याएको भनेर आफूलाई धनहीराले कुटपिट गरेको पीडितले बताएकी छन् । पीडित महिलाका श्रीमान अर्को बिहे गरेर तीन वर्षदेखि झापाको सुरुङ्गामा बस्दै आएको खुलेको छ।
कोरोना भाइरसको दोश्रो लहरबाट बच्न ईयूले नयाँ रणनीति अपनाउने
शौचालय नहुँदा बलात्कारका घटना बढे !
कैलालीमा २ लाख २३ हजार नगदसहित ५ जुवाडे पक्राउ !
माता उतार्ने नाममा बलात्कार गर्ने वनझाँक्री पक्राउ !
बैङ्किङ कसुरका फरार अभियुक्त पक्राउ !
बाँसघारीमा शौंच गर्न गएकी दलित युवतीमाथि सामुहिक बलात्कार !